Pregnancy kufuta karukureta
Pregnancy kufuta Calculator
Pregnancy kufuta karukureta anobvumira kuti convert akanaka kufuta chero vhiki panguva pamuviri, kwakavakirwa mukadzi uremu pamberi pamuviri, nokukwirira pamuviri vhiki. Uyewo zvinoratidza yakanaka pamuviri kufuta chati vhiki renyu nevhiki.
Pindai parameters venyu kuverenga zvakajairika kufuta panguva yepamuviri
Uremu Your pamberi pamuviri: makirogiramu pondo
Your ano uremu: makirogiramu pondo
1 vhiki 2 vhiki 3 vhiki 4 vhiki 5 vhiki 6 vhiki 7 vhiki 8 vhiki 9 vhiki 10 vhiki 11 vhiki 12 vhiki 13 vhiki 14 vhiki 15 vhiki 16 vhiki 17 vhiki 18 vhiki 19 vhiki 20 vhiki 21 vhiki 22 vhiki 23 vhiki 24 vhiki 25 vhiki 26 vhiki 27 vhiki 28 vhiki 29 vhiki 30 vhiki 31 vhiki 32 vhiki 33 vhiki 34 vhiki 35 vhiki 36 vhiki 37 vhiki 38 vhiki 39 vhiki 40 vhiki
Kuguma: makirogiramu pondo
Kufuta kwakasiyana kuti mukadzi mumwe nomumwe uye nokuda mumwe nomumwe pamuviri. Kufuta panguva yepamuviri anoumbwa kubva akawanda zvinoriumba, akadai uremu mwana wacho inenge 6.5-13 pounds, dumbu uye fluid nokuyera kusvika 5 pounds, rakawedzerwa ropa - vanenge 3.5-4 pounds, chipfuva nedumbu - 1 paundi, uye zvibereko muviri mafuta kusvikira 6.5-13 makirogiramu. –
Nokuda musi Calculator
Change inofungidzirwa wakakodzera gore mwana wako, pamuviri zuva uye ano pamuviri izwi.
Yakaorera kupfuura mazuva Calculator
Change mazuva ako yakaorera kupfuura, kana uchida uwedzere mikana yako kuwana pamuviri.
Ovulation karenda Calculator
Change mazuva ako yakaorera kupfuura uye vawane nekarenda ovulation unotevera mwedzi mishoma.
Pregnancy kufuta vhiki nevhiki Calculator
Change akanaka pamuviri kufuta vhiki nevhiki.